Farxiya Fiska iyo Nimco Dareen oo isku heysta Bashiir Hanuuniye - iftineducation.com
iftineducation.com – Wararka ka imaanaaya Magaalada london ayaa sheegaaya in Dagal ba’an uu ka dhex qarxay Labada Fanaan ee Ingiriiska loogu jecelyahay xagga Dumarka waa Farxiya Fiska iyo Nimco Dareen.
Dagaalka fanaaniintan ayaa salka ku haaya Hanashada Muusikiistaha Weyn ee lagu Magacaabo bashiir hanuuniye oo hadda qaba farxiya Fiska.
Farxiyo fiska iyo Nimco dareen
Waxaa soo baxay warar sheegaaya in wali Nimco Dareen ay jeceshahay Bashiir hanuuniye, isla markaana ay sameysay isku-dayo ay ku hananeyso Bashiir hanuuniye taas oo qasabtay in Farxiya Fiska Difaac adag gasho.Wararka Magaalada London la isla dhex maraayo ayaa sheegaaya in Nimco Dareen ay aad u jecleed Bashiir hanuuniye ka hor inta uusan guursan Farxiya Fiska.
Dagaalkan oo ahaa mid qabow bilihii u dambeeyay, ayaa hadda isku badalay mid kulul, waxaana suurta gal ah in Hubka Nuucyadiisa kala duwan la isku adeegsado iyadoo la adeegsanaayo Heeso la isugu jawaabo.
Waxaa la filaaya in ay soo baxaan heeso iska hor jeeda oo ay qorsheynaayaan Labada fanaan, taas oo ku aadan Hanashada Bashiir hanuuniye oo hadda ay gacanta ku heyso Farxiya Fiska oo ka fara maroojisay Nimco Dareen.
Dagaalkan ayaa imaanaaya iyadoo Sanadkii hore ay soo shaac baxday Dagaal udhaxeeyay Ikraan Caraale iyo Falis Cabdi oo isku heystay Fanaanka weyn ee Shiine Akhayaar, inkastoo markii dambe labada dhinac ay beeniyeen in heeso ay soo qaadeen ay isugu jawaabeen.